Is-casilaadii Shariif kadib madaxweyne Farmaajo oo kulan la yeeshay Mursal - Caasimada Online
Home Warar Is-casilaadii Shariif kadib madaxweyne Farmaajo oo kulan la yeeshay Mursal
Is-casilaadii Shariif kadib madaxweyne Farmaajo oo kulan la yeeshay Mursal
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa kulan is xogwareysi ah madaxtooyada kula yeeshay Afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sh.Craxmaan.
Madaxweynaha Soomaaliya iyo guddoomiyaha baarlamaanka ayaa kulankooda wuxuu ku saabsanaa iska xogwareysiga xaaladda guud ee dalka iyo shaqooyinka horyaala baarlamaanka Soomaaliya.
Maxamed Mursal, ayaa doorweyn ku lahaa in xildhibaanada Koonfur Galbeed ay yimaadaan magaalada Muqdisho, taasi oo culees ku noqotay Shariif Xasan Sheikh Aadan oo ugu dambeyn shalay tanaasulaad sameeyay.
Kadib Iscasilaada Shariif Xasan, waxaa jira walaac soo kordhay oo ah in Shariif Xasan lala damacsan yahay afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya, taasi oo caqabad ku noqon doonto haddii ay dhacdo xukuumada iyo xafiiska madaxweynaha.
Shariif Xasan, ayaanan la ogeyn ciyaarta cusub ee ciyaari doono, waxaase muddadii uu siyaasadda Soomaaliya ku jiray ahaa ruux heystay taageerada Ethiopia oo wax badan ka sameeyay Soomaaliya.